नेपाल आज | मेडिकल माफिया सुनिल शर्माको सर्टिफिकेट नक्कली
नोवेल शिक्षण अस्पतालवाट मेडिकल क्षेत्रमा हात हालेका डा. सुनिल शर्माले अहिले झण्डै आधा दर्जन मेडिकल कलेजका लगानी गरिसकेका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण ब्यवसायमा घाटा लागेको भन्दै मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु पाखा लाग्दै गर्दा शर्माले भने एकपछि अर्को कलेजमा लगानी वढाउँदै लगेका छन् । उनको यो रफ्तार असामान्य भएको जानकारहरु वताउँछन् । शर्माको अप्रत्यासित प्रगति र उनी माथि लाग्ने आरोपका कारण त्यस क्षेत्रका कतिपय जानकारहरुले भने उनलाई मेडिकल माफिया पनि भन्ने गरेका छन् ।
छोटो समयमा मेडिकल क्षेत्रमा आफनो वर्चश्व वनाउँदै गएका तिनै डाक्टरको योग्यताको सर्टिफिकेट भने नक्कली भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार शर्माको आइएस्सी प्रमाण–पत्रमा कैफियत छ। ०७३ सालमा प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टर पक्राउ गर्ने अभियान चलाउँदा शर्मा फरार भएका थिए । त्यस वखत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ‘अपरेसन क्वाक’ चलाएर धेरै नक्कली डाक्टरलाई पक्राउ गरेको थियो ।
वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगरबाट डाक्टरहरू पक्राउ गर्दा शर्मा वेपत्ता भएका थिए । त्यतिबेला ब्युरोमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार उनलाई खोजी गर्दा समेत फेला परेका थिएनन्।
नोबेल सञ्चालक हुनुपूर्व शर्मा चीनका विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी ओसार्ने गर्थे। विद्यार्थी ओसार्दैगर्दा उनले नक्कली आइएस्सी प्रमाणपत्रकै आधारमा त्यतैबाट एमबिबिएस प्रमाणपत्र लिएको प्रहरीको दावी छ। उनका निकटवर्तीहरु पनि शर्माको एमबिबिएस शैक्षिक प्रमाण पत्रमा आशंका गर्छन । राज्यका निकायहरूले पनि उनको योग्यताको प्रमाण पत्रमा शंका गरिरहेका वेला उनी फरार हुनुले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्ने श्रोतको दावी छ ।
त्यसो त ०७० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनको नक्कली प्रमाण पत्रका विषयमा छानविन गरेको थियो । आयोगले उनलाई सो विषयमा बयान नै लिएको थियो। तर, शर्मा केही दिनमै अख्तियारवाट छुटेका थिए । ब्युरोको खोजीका क्रममा भने उनले तीन महिला देश नै छोडेको श्रोत वताउँछ ।
स्रोतका अनुसार शर्माको एसएलसी प्रमाण पत्रमै पनि शंका ब्यक्त गर्नु पर्ने आधार छन। उनले माद्यमीक शिक्षा मोरङ्गको लेटाङमा लिएका हुन । त्यहाँ एसएलसी फेल गरेपछि उनी कालीकोट पुगेर विद्यालय भर्ना भएका थिए । शर्मा त्यहिवाट एसएलसी प्रथम श्रेणीमा पास गरेको प्रमाण पत्र वोकेर फर्केका थिए । पढ्नमा खासै रुचि नभएका कारण शर्मा ठाउँ परिवर्तन गर्नासाथ प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको विषयमा उनीमाथि आशंका गर्ने गरिएको छ ।
एक पटक फेल भएका शर्र्मा कालिकोट पुगेर प्रथम श्रेणीको प्रमाण पत्र लिएर फर्कनु नै आश्चर्यको विषय भएको उनीहरु वताउँछन्। लेटाङमा माध्यमिक तह पढ्दा राजेन्द्र न्यौपाने नाम गरेका उनी त्यहाँ एसएलसी फेल गरेपछि कालीकोट पुगेर सुनिल शर्माको नाममा एसएलसी प्रथम श्रेणीमा पास भएको प्रमाण पत्र लिएर फर्किएको श्रोतको भनाई छ।
यस विषयमा डा. शर्माले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। उनको मोवाईल पनि सम्पर्क वाहिर रहने गरेको छ।
नोवेल शिक्षण अस्पताल सुनिल शर्मा मेडिकल माफिया सर्टिफिकेट नक्कली